भारतबाट आएका मजदुर बोकेको गाडी दुर्घटना हुदा १२ जनाको मृत्यु | Himal Times
Home Flash News भारतबाट आएका मजदुर बोकेको गाडी दुर्घटना हुदा १२ जनाको मृत्यु
भारतबाट आएका मजदुर बोकेको गाडी दुर्घटना हुदा १२ जनाको मृत्यु
काँके । बाँकेमा मिनि बस” हाईस” दुर्घटना हुदा १२ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । बाँकेबाट सल्यान जाँदै गर्दा आइतबार मध्यराती पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको राप्तीसोनारी-२ ठुरियामा उक्त दुर्घटना भएको हाे ।
भारतबाट आएका मजदुरलाई दाङ हुँदै सल्यानतर्फ लैजान हिँडेको ना. ५ ख ५९९५ नम्बरको हाईस बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित ठोरिया जंगलमा बिग्रिएर राेकि राखेको ना ५ ख ५९९५ नम्बरको ट्रकमा टाेक्किदा उक्त दुर्घटना भएको प्रदेश नं. ५ का प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार बैदारले जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालसम्म १२”जनाकाे ज्यान गएकाे र ११ जना घाइते भएका छन । मृतक मध्ये ११ जना पुरुष र एकजना महिला रहेका छन । २१ घाइते मध्ये ५ जनाकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे बताएको छ।
मृतकहरूको हालसम्म सनाखत हुन सकेको छैन। मृतक र घाइते सबैलाई राति नै भेरी अस्पतालमा राखिएको छ।
Previous articleक्वारेन्टाइनमा खटिएका प्रहरीमाथि हातपात गर्ने दुई जना पक्राउ
Next articleक्वारेन्टाइनमा खाना नपाएपछि गाउँपालिका घेराउ
खुट्टामा चोट लागेर प्लाष्टर गर्नुपर्ने बिरामीलाई रेबिजको खोप
Himal Times - July 16, 2021
कोरोना : नेपालमा गएको २४ घण्टामा १ हजार १ सय ११ जना संक्रमित, मृत्यु ८ जना